CAFFEE – (Onk. 21,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Qabeenya Namaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii manneen hojii 3 gamaaggameera.
Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Paabliik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/Saayinsiifi Teknoloojii Qunnamtii Odeeffannoofi Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi hanqinaalee jiran adda baasuun kallattii kaa’eera.
Raawwii Biiroo Paablik Sarvisiin walqabatee, hojiiwwan boqonnaa qophii karooraa keessatti hojjetamaa turaniifi sosochii kenna tajaajilaa dabalatee sanadoonni adda addaa qophaa’uun, raawwii KGT darbee gamaaggamuun Karoora Waggaa 10 dhufu karaa hirmaachisaa ta’een qopheessuun, fooyya’iinsa sirna haqaa irra deebiin hundeessuun, sektaroota isaaf itti waamaman waliin qindoominni jiru gaarii ta’uu akka ciminaatti madaalee jira. Gama biraan, gurmaa’iinni Godinaalee, Aanaaleefi Gandootaa istaandaardii malee hundaa’uun, hojiin deeggarsaafi hordoffii karaa gaafatamummaa hordofsiisuu danda’uun gaggeeffamuu dhabuun, gurmaa’inaan walqabatee caasaan mootummaa sadarkaa Gandaatti argamu laafaa ta’uufi bakka baay’inni ummataa heddummaatutti kenni tajaajilaa kan hin jirre ta’uu akka hanqinaatti koreen kun qoratee jira.
Raawwii A/T/Saayinsii T/Q/On walqabatee, tajaajilli wiirtuu daataa manneen hojii hundaaf hojjetamaa jiruufi qindoominni qaamolee adda addaa waliin jiru akka ciminaatti qoratamee jira. Gama biraan, mirgi qabeenyummaa sammuu (patient right) karooraa gadi ta’uufi hojiin inispeekshinii akka hanqinaatti dhimmoota ilaalaman keessaa ijoodha.
Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaan walqabatee, damee barnoota adda addaa dabalataan saaquun hirmaannaa barattootaa dabaluun, qorannoofi qo’annoowwan rakkoo biyyaafi naannoo furuu danda’an irratti xiyyeeffachuun hojiin hojjetamaa jiruufi paablik sarvaantii gahoomsuuf jalqabbiin jiru akka ciminaatti kan ilaalame yommuu ta’u, bu’aa qorannoofi qo’annoo akkasumas leenjii qorachuu irratti hanqinni kan jiru ta’uu korichi madaalee jira.
Walumaagalatti, manneen hojii sadeen biratti dhimmoonni akka ciminaatti ilaalaman galtee hojii itti aanuuf kan fayyadan ta’uu kan eere korichi, kanneen hanqina ta’anii adda bahan immoo karoora kurmaana 2ffaa keessatti xiyyeeffannoo argatanii irratti hojjetamuu qabu kan jedhan Dura Taa’aa Korichaa Obbo Tasfaayee Gashooti.
Toorbee kana 7744
Ji'a kana 52504
2008 irraa eggalee 4426660